Doodle ku saleysan Google wuxuu sharxayaa kala fogaanshaha bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Google waligiis wuxuu ahaa mid gaar ah sababo badan awgood. Waqtigana waa isticmaale u rogaya doodooda bogga raadinta taasina waa habka ugu caqliga badan ee loo muujiyo qof kasta oo ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaadi karo si loo joojiyo faafitaanka COVID-19.
Waa adag tahay inaan wax nidhaahno maxaa yeelay doodle wuxuu sharxayaa wax walba. Si fudud uga faalloonaya inay tahay inaan dhowr mitir ka fogaanno shakhsiyaadka kale markii nalagu qasbo inaan sidaas yeelno, adeegsade casriyeysan ayaa ku sharaxaya sida ugu caqliga badan uguna macquulsan isagoo fogeeya xarfaha sameeya astaantiisa.
Doodle oo si dhakhso leh ula xidhiidha mid ka mid ah tallaabooyinka ugu wax ku oolka badan ee looga hortago faafitaanka cudurka 'coronavirus' adduunka oo dhan. Kala fogaanshaha bulshada ee daruuriga ah si looga hortago qof aan astaamo u muuqan inuu ku faafo qof aan weli la xiriirin qof qaba COVID-19.
Taasi waa, xitaa haddii aadan lahayn astaamo, waa waa muhiim inaad bulsho ahaan iska fogeyso qof walba taasi kuma xirna baaxadda gurigaaga. Waxaan ka hadlaynaa inaanaan u arkin qofna guriga, ka fogaanno waxyaabaha lagu buuxiyo dukaanka weyn, ama ka fogaanno qof kasta oo aad waddada kula kulanto markaad u socoto meel kasta.
Taasi kala fogaanshaha bulshada ayaa aad ugu cad fikradda weyn isticmaalahan iyo in sifiican ay uqaadan karaan G weyn si loo soo jiito dareenka qof kasta oo aan wali si dhab ah u qaadan waxa ka dhacaya meeraha.
La taariikhda google doodles Waxay ahayd waqti dheer iyo in loo dabaaldego dhalashada qof caan ah oo ka mid ah cilmiga sayniska ama farshaxanka, ragga ka socda Google waxay qaataan mashiinka raadinta si ay u dhigaan. Waan arki doonaa haddii ay naga yaabiyaan maalmahan iyo toddobaadyadan mid. Hadaad rabto inaad ogaato fanaanka iyaga daryeela.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Muuqaalka Google ee masaafurinta bulshada ee xariifsan ee uu sameeyay isticmaale
BBC-du waxay ka dhigtaa 16 oo saamayn dhawaaq ah qof walba si bilaash ah